कांग्रेसको ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ अभियान – Chitwan Post
कांग्रेसको ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ अभियान
प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा लोकतन्त्रको हिमायती मानिने नेपाली कांग्रेस आजदेखि दोस्रो चरणको जागरण अभियानमा लागेको छ । अभियानको प्रमुख मुद्दाहरुमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, महँगी, महिला हिंसा, सरकारले ल्याएको र ल्याउन लागेको अलोकतान्त्रिक विधेयक र सरकारको कार्यशैलीविरूद्ध खबरदारी गर्नेलगायत छन् । जागरण शब्दले आफ्नो कर्तव्य तथा अधिकारको बोध भन्ने बुझाउँछ, अर्थात् सचेत रहनु, चलायमान हुनु वा जाग्नु भन्ने अर्थ दिन्छ । कांग्रेस प्रतिपक्ष दल भएर वा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अनुसरण गर्ने दलको हिसाबले प्रतिक्रियात्मक हुनु स्वाभाविक हो । तर, कांग्रेसको सक्रियता हेर्दा गतिहीन, शक्तिहीन र प्रतिक्रियाविहीनजस्तै बन्न पुगेको छ । कांग्रेस गतिशील नहुनुको परिणाम अहिले जनतामा देखिन थालेको व्याप्त निराशा, दलहरुप्रति वितृष्णा र सडकमा देखिने जनआक्रोशले पुष्टि गर्छ । कांग्रेसले वैशाख २५ देखि जेठ २५ गतेसम्म गरेको एकमहिने राष्ट्रिय जागरणका क्रममा स्थानीय तहका कार्यकर्ताको पार्टीप्रति चिन्ता, निष्ठा र समर्पण उस्तै देखिए पनि केन्द्रीय नेतृत्वमै जागरण र गतिशीलता नदेखिएको गुनासो रह्यो । कांग्रेस जागरण अभियानमा हिँडे पनि कार्यकर्तामा उत्साह छैन । किनभने, नेतृत्वमा एकता छैन । नेविसंघ, तरूण दल, किसान संघ, दलित संघजस्ता भ्रातृसंस्थाहरुको अधिवेशन र पार्टीका विभाग र संगठन अस्तव्यस्त र अन्योलग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा जागरणको औचित्यमा सवाल उठेको छ ।
कांग्रेस लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो । यसले धेरै संघर्ष र आन्दोलनको नेतृत्व गरी जित्दै आएको छ । इतिहासका कठिन मोडहरुमा कांग्रेसले गरेको संघर्षले देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आएका पनि छन् । तर, कांग्रेस आफ्नै कमजोरीले चुनावमा पराजित भयो । मुलुकमा दण्डहीनता र भ्रष्टाचार बढेका छन् । सुशासनको सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन । सरकार विभिन्न काण्डहरुका कारण अलोकप्रिय छ । तर, कांग्रेस सरकारबाहिर रहँदा पनि किन लोकप्रिय हुन सकेन ? यस्ता प्रश्न जनताले सोध्न थालेका छन् । कांग्रेसले जागरण अभियानमार्फत भ्रष्टाचारविरूद्ध भण्डाफोर गर्ने भनिरहेको छ । अहिलेसम्म कांग्रेस कहाँ सुतेर बसेको थियो ? जनताले स्वतःस्र्फूतरुपमा सडकमा भ्रष्टाचारविरूद्ध सशक्त आवाज उठाइरहँदा कांग्रेस संसद्मा किन कडारुपमा प्रस्तुत हुन सकेन ? स्मरणीय छ, कांग्रेसको सरकार रहँदा तत्कालीन एमालेले लाउडा काण्डमा निरन्तर ५७ दिनसम्म संसद् ठप्प पार्दै सडक संघर्ष चर्काएको थियो । अहिले बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताका विषयमा कांग्रेस किन मौन छ ? साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण, बूढीगण्डकी भ्रष्टाचार, एनसेल कर छलीजस्ता दर्जनौँ प्रकरणमा कांग्रेसको के स्वार्थ लुकेको छ ? एकपछि अर्को काण्ड पुनरावृत्ति भइरहँदा कांग्रेसले किन कर्मकाण्डी विरोधमात्र गरिरहेको छ ? जनताले जान्न चाहेका छन् ।
कांग्रेस अझै पनि सत्ताको पराजित मानसिकतामै छ । चुनावमा सत्तापक्षले मात्र होइन कांग्रेसले पनि जनतालाई थुप्रै आश्वासन बाँडेको थियो । चुनाव हारे पनि जिते पनि जनतासँग गरेका वाचा बिर्सने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । अहिले दुई तिहाइ कम्युनिस्ट सरकार स्वार्थीहरुको बन्दी बनिरहेको छ । जनताको सेवासुविधामा भन्दा निरंकुश शासन लाद्न उद्यत भइरहेको छ । सरकार जनमुखी रहेन, जनतामा निराशा छायो भनेरमात्रै कांग्रेसले छुटकारा पाउँदैन । कांग्रेस बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित दूरगामी सोच बोकेको पार्टी मानिन्छ । अझै पनि कांग्रेसमा सामाजिक न्याय, समानता र सुरक्षाको खोजी गर्ने मानिसहरु छन् । कांग्रेसभित्र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, विधिसम्मत प्रक्रिया र सामूहिक नेतृत्व नहुँदा लोकतन्त्र नै संकटमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ । अहिले गणतन्त्र संकटमा परेका आवाजहरु सुनिन थालेका छन् । लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको छ । संघीयता खतरामा परेको छ । व्यवस्थाविरोधी नारा घन्किन सुरू भइसकेको छ । यो कसको कमजोरीको उपज हो ? कांग्रेसले अझै पनि इतिहासको गौरवगाथामात्रै गाएर बस्ने हो भने वर्तमानले नछाड्ला भन्न सकिँदैन । आफ्ना कमजोरीको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा इमानदार बन्नुपर्छ । अहिले सतहमा देखिएका काण्डहरुमा पार्टीले कसैसँग सम्झौता नगरीकन साँच्चै भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्न सक्यो भने कांग्रेस जागरण सफल भएको ठहरिने छ ।